डिपिएल क्रिकेटः दोस्रो खेलमा विराटनगरको जित, अत्तरिया ८ विकेटले हार्‍यो. – Sabaikoaawaj.com
Tuesday 26th January 2021 । मङ्लबार, माघ १३, २०७७
डिपिएल क्रिकेटः दोस्रो खेलमा विराटनगरको जित, अत्तरिया ८ विकेटले हार्‍यो.
बिहिबार, चैत्र ३१, २०७३ 10:31:08 PM	मा प्रकाशित
कैलाली, ३१ चैत/ सगरमाथा धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट अन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा विराटनगर किंग्सले सीवाइसी अत्तरियालाई ८ विकेटले पराजित गरेको छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको सीवाईसी अत्तरियाले निर्धारित ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ९२ रन मात्रै बनाएको थियो ।
जवाफी व्याटिङमा आएको विराटनगर किंग्सले ११ दशमलव ५ ओभर खेल्दै ९३ रनको लक्ष्य भेटायो । जारी लिगमा विराटनगर रन चेज गरेर जित्ने पहिलो टिम बनेको छ । यसअघिका ७ औं खेलमा पहिला व्याटिङ गर्ने टोलीले जितेको थियो । सीवाईसी अत्तरियाको स्कोर पहिला व्याटिङ गरेको टोलीले डीपीएलमा बनाएको सबैभन्दा कम स्कोर हो ।
सीवाईसीका महबुब आलमले २७ रन बनाए भने अन्य व्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । करण केसी इनिङ्गको अन्तिम बलमा १७ रन बनाई रन आउट भए । यसैगरी विराटनगर किंग्सका सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट लिए भने जितेन्द्र मुखियाले २ विकेट लिए । विराटनगर किंग्सको तर्फबाट आरिफ शेख र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले उत्कृष्ट ६७ रनको साझेदारी गरे । शेखले नटआउट ४६ रन प्रहार गरे भने ऐरीले २६ रन बनाए ।
आजै भएको पहिलो खेलमा कञ्चनपुर आइकोनिकले धनगढी टिम चौराहलाई ११ रनले पराजित गरेको थियो ।
भोलिको पहिलो खेल रुपन्देही च्यालेन्जर्स र काठमाडौं गोल्डेन्स् तथा दोस्रो खेल टीम चौराहा र सिवाईसी अत्तरियाबीच हुनेछ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र ३१, २०७३ 10:31:08 PM
See all posts by Ganesh Pahari